Mazita Mana AJesu
Chitatu, 29 Chikumi 2022
"Nokuti takazvarirwa mwana. Takapiwa mwanakomana. Hushe huchava pafudzi rake. Zita rake richanzi Unoshamisa. Gota. Mwari une simba. Baba vekusingaperi. Muchinda werugare" (Isaya 9:6-7).
Isaya ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Mwari vakanga vamuzivisa nezvemwana. Mwana uyu akanga achazozvarwa. Mwari vakabva vamuzivisa mazita emwana uyu. Rekutanga rakanga richazova, "Gota Rinoshamisa".
Mashoko aya anoturikirwa kubva kuChihebheru. Mashoko eChihebheru acho anoreva "Mhare Pakuronga". Mashoko aya anotsanangura Mweya Mutsvene. Ndizvo zvatinovona muna Johane 14 ndima 16. Inoti, "Ini ndichakumbira Baba kuti vakupei mumwe Munyaradzi. Ivo vachakupai Munyaradzi uyu kuti agare nemi nokusingaperi. Munyaradzi uyu ndiye achange ari Chipangamazano, Mubatsiri, Munyengetereri, Gweta, Musimbisi, neMununuri, anouya pamunopererwa nesimba" (AMPC).
Mwari ndivo vakanga vari kuronga izvi. Vakanga varonga kuti mwana uyu azvarwe. Akure. Afe. Avigwe. Agozomuka kuvakafa. Mushure mazvo aifanira kuzodzoka. Achidzoka ari Mweya Mutsvene. Achishanda ari musangano revatsvene vake. Ari gota rinoshamisa. Achititungamirira kurarama sehunyanzvi.
Sangano revatsvene richazoenda. Ishe Jesu vozouya kuzosungunura Vaisiraeri. Vachauya vari Mwari VeMasimba. Izvi ndizvo zvatinovona muna Taitasi 2 ndima 13. Inoti, "Tichitarisira chiropafadzo chiya. Chekudzoka kwaMwari wedu vakuru. Ivo Muponesi wedu. Jesu Muponesi". Izvi zvichaitika pahondo yeAmagedhoni. Hondo iyi icharwiwa muIsiraeri. Vajudha vachatambudzwa zvikuru panguva iyi. Vachange vari kutambudzwa namuponesi wenhema. Vazhinji vavo vachatiza. Asi Jesu vachauya. Vachange vachibva kudenga. Vachauya vaine hondo huru. Iyi ihondo yevatsvene. Vagonunura Isiraeri. Vachabva varanga muponesi wenhema. Pamwe nevavengi vaMwari vose.
Mushure mazvo Vajudha vachaziva Jesu saBaba Vekusingaperi. Vanenge vakamboramba Jesu. Vachivaramba kwemakore zviuru zviviri. Asi zvino Jesu vaya vozovanunura. Vachivarwira kumuponesi wenhema. Saka vachazouya kuna Jesu ava. Vachichema. Vachidemba. Vachitaura mashoko ari muna Mapisarema 103 ndima 10 kusvika 13. Vachiti, "Haana kutiitira sezvakafanira zvivi zvedu. Kana kutipa mubairo sezvakafanira zvakaipa zvedu. ... Sokunzwira tsitsi kwababa vana vake, saizvozvo Jehovha unonzwira tsitsi vanomutya".
Zita rekupedzisira ndere kuti Muchinda weRugare. Jesu vanenge vanunura Isiraeri. Vaigamuchira zvekare. Vachabva vatanga hushe. Vagotonga kwechiuru chemakore. Makore aya anenge ari erugare. Isu tichange tiri kutonga pamwe chete naJesu ava. Tichitonga marudzi epanyika pano. Izvi ndizvo zvatinovona muna Zvakazarurwa 20 ndima 4 kusvika 6.
Mazuva andiri kutaura nezvawo aya haasi kure. Zita rekutanga takatorivona. Tatova nemakore ava kusvika zviuru zviviri tinaro. Ndiyo nguva yatiri kuvona Mweya Mutsvene. Mweya Mutsvene ava vari kushanda musangano revatsvene. Vari kushanda vakamiririra Muponesi. Saka kubvutwa kwevatsvene hakuchisiri kure. Iwe chifana kugadzirira. Tenzi vava pedo kuuya.
Imi Mwari! Mune masimba ose! Vanhu vacharumbidza mabasa enyu. Vachisiya vana vavo vachirumbidzavo. Vachipupura mabasa enyu makuru. Munoita sekuronga kwenyu. Njere dzenyu dzinoshamisa. Hareruya!